Andry Rajoelina : Hotorian’ny HFI -
AccueilRaharaham-pirenenaAndry Rajoelina : Hotorian’ny HFI
Andry Rajoelina : Hotorian’ny HFI
14/08/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
ANTANANARIVO 14-03-2009 - Binnen drie maanden tijd heeft de 34-jarige oppositieleider Andry Rajoelina Madagaskar op zijn kop gezet. Hij werd eind december 2007 gekozen tot burgemeester van de hoofdstad Antananarivo en zette vervolgens frontaal de aanval in op de zittende president Marc Ravalomanana (59). ANP EPA STR
Ny alakamisy izao no hanomboka hitety ireo rafitra rehetra noheveriny fa tokony hametrahana ny fitoriany an’i Andry Rajoelina ny Hetsika ho Fanorenana Ifotony (HFI). « Maro loatra ireo harem-pirenena nahondran’ity filohan’ny Tetezamita teo aloha ity, ka tsy afaka ny hipetra-potsiny manoloana izany izahay » hoy i Pety Rakotoniaina izayanisan’ny mpitarika ity hetsika ity omaly tetsy amin’ny kianjan’ny 13 Mai. Hisy araka izany ny fametrahana fitoriana eny anivon’ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana (HCC), sy ireo seha-pitsarana maro eto amin’ny firenena manomboka amin’io andro io. Hisy ihany koa ankoatra izay ny fametrahana ireo porofo rehetra eny anivon’ny solontenan’ny vondrona iraisam-pirenena. Fihetsika entin’izy ireo mampahafantatra amin’ireto firenena mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara ireto fa tsy hoe finiavana te hitory olona fotsiny no mahatonga ny HFI manao izao fihetsika izao fa tena mitombina sy misy porofo mazava.
Anisan’ireo fototr’ity fitoriana ity ny momba ny fanondranana tsy ara-drariny, sy tsy nanara-dalàna ireo harem-pirenena toa ny Andramena, izay nahazo vahana nandritra ny fotoana nitondran’i Andry Rajoelina ny Tetezamita. Toa izany ihany koa ny fanondranana ireo volamena tsy nanaraka ny lalàna velona teto Madagasikara. Volabe mihoa-pampana no nahodina raha toa ka ireo harena roa ireo fotsiny no hanaovana kajy tsotra, raha ny nambaran’i Pety Rakotoniaina dia anisan’ny mpitarika ny HFI. Mbola tsy nanaovan’ny filohan’ny Tetezamita teo aloha tatitra tamin’ny vahoaka malagasy ihany koa ny nanaovana ny vidin’ilay fiaramanidina Air Force One hatramin’ny androany. Nierany tamin’ny vahoaka anefa ny fivarotana azy io nandritra ny fanonganam-panjakana nataony ny taona 2009. Tsy fantatra hoe ohatrinona marina ny vidy nivarotana azy, ary nanaovana inona? Milaza ho manana porofo tamin’ny fanodinkodinam-bolam-panjakana ihany koa ireto mpitarika ny hetsika ho fanorenana ifotony ireto, ary hoentiny eo anivon’ny fitsarana mahefa avokoa izany ao anatin’izao fitoriana ataony izao.
Ny tanjona dia ny tsy hiverenan’ireo efa nahavita heloka bevava hitondra ny firenena intsony ao anatin’izao fifidianana izao raha ny fanazavan’izy ireo. Natsahatra kely ankoatra izay ny hetsika ataon’ny HFI etsy amin’ny kianjan’ny 13Mai ao anatin’izao fiatrehan’ny mpianatra ny fanadinana CEPE izao, raha ny nambaran’ireo mpitarika.
Fampandrosoana ny firenena : Zava-dehibe ny fisandratana ara-toe-tsaina
Lohahevitra isan’ny goavana ao anatin’ny politika sy ny fitantanana ny firenena ny fampandrosoana. Raha te ho tonga amin’izany tanjona izany, dia ilaina ary zava-dehibe , hoy ny filoha Hery Rajaonarimampianina ny fisandratana ara-toe-tsaina. “Ny fisandratana ...Tohiny
Governemanta Ntsay Christian : Mamboly Pesta
Nanafatra mpanao gazety vahiny ny MAPAR:HANAO FAMPISEHOANA ANY SOAMAHAMANINA IREO MPANAO POLITIKA
Mahajanga : Vita ny lalana ao an-tampon-tanàna
Filohan’ny HCC : Hiantoka ny volan’i Mamy Ravatomanga